Daawo Sawirro: RW Kheyre oo qaaday talaabo lama filaan ah oo aan looga baran madaxda dalka | Booqasho.org News Online - Tabiyaha Wararka Xaqiiqda Ah
Home Wararka Maanta Daawo Sawirro: RW Kheyre oo qaaday talaabo lama filaan ah oo aan...
Daawo Sawirro: RW Kheyre oo qaaday talaabo lama filaan ah oo aan looga baran madaxda dalka
Raisul wasaaraha xukuumada Somalia ayaa galabta s lama filaan ah uga degay gaadiidkii gelbinayey isagoo dad shacab ah la fariistay maqaayad shaaha laga cabo oo ku taalla degmada Shibis ee gobolka Banaadir.
Xasan Cali Kheyre ayaa xiligaas ka soo baxay kulan dhaqaale loogu ururinayey abaaraha oo ka dhacay hotelka city Palace ee magaalada Muqdisho.
Raisul wasaraha ayaa si geesinimo leh u fadhiistay biibito ay fadhiyeen dadweyne ay ku jireen caruur, wuxuuna dalbaday koob shaah, isagoo intii uu shaaha cabayey sheeko goos goos ah la wadaagayey dadweynaha goobta fahiyey.
Talaabadan madaxdu ay u dhex galayaan shacabkooda oo ah mid ku dayasho mudan oo aan looga baran hogaamiyeyaasha Soomaalida ayaa waxaa u riyaaqay bulshada Soomaaliyeed.
“Shacabkeyga waxaan u sheegaya inaan la wadaagi doono wax walba oo nala soo gudboonada intaan ku jirno halganka lagu soo celinayo sharafta dadka iyo dalka” ayuu yiri Ra’iisul Wasaaraha qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka.
Dhowaan ayey aheyd markii raisul wasaaraha booqday xeebta Liido halkaasoo uu dhexgalay dadweyne dhalinyaro u badna oo halkaas ku damaashaadaayey.
Previous articleMadaxweynaha Mareyanka oo ku dhawaaqay Go’aan soo dadajin kara dagaalkii 3-aad ee aduunka
Next articlePalestinian ‘day of rage’ in support of prisoners